Chishamiso Munamato Wekuporesa Uye Kupora | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Chishamiso Munamato Wekuporesa Uye Kupora
Kuporesa ndechimwe chezvishuwo zvikuru zvaMwari kuvana Vavo. Hakusi kuda kwaMwari kuti tirarame hupenyu hwakatakurwa nehurwere. Ekisodho 23:25 inotiudza kuti Mwari achabvisa kurwara kune vese vanomushandira, ndiko kuti achabvisa kurwara kubva kuvana vake vese. Jesu akashandisa huzhinji hwehushumiri hwake achiporesa vanorwara, pachokwadi anga achiparidza kana kurapa marudzi ese ezvirwere. Jesu haana kumboita hanya nemazita kana rudzii rwezvirwere uko, bhaibheri rakati akavapodza vese Nhasi tichave tichiita munamato munamato wekupodzwa uye kupora. Izvi munamato wekupora achakuisa pamusoro hosha nezvirwere muzita raJesu.
Tinoshumira Mwari weminana, VaHeberu 13: 8, inotitaurira kuti Jesu Kristu haashanduki zuro, nanhasi, nekusingaperi. Haana kuchinja, kana akapora nezuro, achapora nhasi nekusingaperi. Nekudaro, kuti mumwe agamuchire kurapwa kwake, tinofanirwa kuve nekutenda. Mwari havashande munzvimbo isina rutendo. Mwari havamanikidze kuporesa pauri. Unofanira kutenda musimba rake rekuporesa muzita reMwanakomana wake Jesu .Jesu akaramba achiudza vanhu vaAkaporesa, 'kutenda kwako kwakuponesa ',' ngazvive kwauri maererano nekutenda kwako '. Izvi zvinodaro nekuti isu kuti tigashire kuporeswa kwedu, tinofanira kunyengeterera munamato wekupora kuti ushande muhupenyu hwedu, tinofanirwa kutenda musimba rekuporesa raMwari kubudikidza na Kristu. Munamato wekushamisa uyu wekuporesa uye kupora ndiyo minamato iwe yaunogona kuzvinyengeterera iwe pachako uye zvakare kune mumwe munhu anoda kurapwa, vafundisi vanogona kuinamatira ipapo kune vamwe vari kurwara kana vanogona kuinamata kazhinji pamusoro pechechi. Rangarira kuti Mwari chete anoporesa, vanachiremba vanogona kurapa asi Mwari chete anoporesa, iwe neni hatisi vaporesi kana vashandi vezvishamiso, Mwari chete anoporesa uye nhasi sezvaunoita munamato uyu wekuporesa, uchaona simba raMwari rinoporesa riri kushanda mukati mako Hupenyu muzita raJesu.
1). Baba ndinokutendai nekuti ndimi munoporesa kurwara nezvirwere zvese muzita raJesu
2). Baba, neropa raJesu Kristu, geza zvivi zvakachena zvemunhu, izvo zvinogona kutadzisa simba rako rekuporesa kuti usvike kwavari muzita raJesu.
3). Baba regai simba renyu rekuporesa ribate chero anorwara mumuviri nhasi muzita raJesu
4). Baba, rega chirwere cheropa chishandurwe neropa raJesu muzita raJesu.
5). Baba, munhu wese, uyo akagadzwa kuti auraye nezvirwere ngaatore kununurwa kwakazara izvozvi muzita raJesu.
6). Baba, handina basa nerudzi rwezvirwere izvo vana venyu varikushungurudzwa nadhiyabhori, podzai vese muzita raJesu.
7). Ini ndinoraira kurwadziwa kwese kuri mumuviri kuti kupora muzita raJesu
8). Ini ndinoraira misoro yose kuti iporeswe muzita raJesu
9). Ini ndinoraira kuti fomu rega re feya rive risipo muzita raJesu
10). Ini ndinoraira chirwere cheshuga kuti chiparadzwe muzita raJesu
11). Ini ndinoraira chirwere chekuti chirwere cheshuga chishandurirwe AA ikozvino !!! Muzita raJesu
12). Ini ndinodaira kuti marariya ipore izvozvi Ipin zita raJesu
13). Ini ndinoraira chimiro chega chekushaiwa simba mumuviri kuti chienda Zvino muzita raJesu
14). Ini ndinoraira kupisa kwemukati kuti dissapear ikozvino muzita raJesu
15). Ini ndinoraira mafomu ese uye mhando dze STDs kuti dzigadzire izvozvi !!! Muzita raJesu
16). Ini ndinoraira maziso asingaone kuti avhurike ikozvino muzita raJesu
17). Ini ndinoraira kuti chirwere chechirwere chose chinopedzwa muzita raJesu
18). Ini ndinoraira chirwere chega chendangariro kuti chiporeswe zvino muzita raJesu
19). Ini ndinoraira imwe nzira yega yega yehurwere nezvirwere zvakabata vana vako zvakasungwa zvinoparadzwa muzita raJesu.
20). Baba ndinokutendai nesimba renyu rekuporesa rakatoshanda muzita raJesu.
Previous nyaya20 Ane Simba Munamato weKuporesa Kenza
inotevera20 Simba Rinamato rekuporesa Shamwari
Tanya Mathew Kurume 3, 2019 At 1:08 pm
Izvi ndezvaamai vangu avo vari kutambura nedambudziko remukaka. Haadi kuenda kunovhiya. Vabereki vangu vari kugara vega kumusha. Haaende kuchipatara kunyangwe tikamumanikidza. Anogara achiti ari kunamata uye ave nekutenda muna Mwari kuti Anomuporesa. Ndokumbirawo munyengeterere kuti adzokere zvakakwana kuona uye kuti aporeswe pasina kuvhiyiwa.
Mufundisi Ikechukwu Chinedum Kurume 3, 2019 At 5:37 pm
Hi Tanya, Isu tinoshumira Mwari wezvishamiso, uye Mwari haapikisane nemaitiro ekurapa, its ok kutsvaga nzira dzokurapa, zvisinei inyaya yekutenda. Kana kutenda kwake kuri pakurapa kweumwari saka haafanire kuora mwoyo. Muhushumiri hwedu, takaona matambudziko mazhinji emaziso aporeswa. Ingomuudza kuti averenge bhuku raJohani 9: 1-7, uye uenderere mberi nekuzivisa kurapwa kwake muna Kristu Jesu. Ini ndinonamata kuti Simba raMwari rifukidze maziso ake izvozvi uye riunze kurapwa nekukasira kwaari muzita raJesu. Ameni. Mwari vakukomborere.
Lindiwe Nxumalo Kurume 7, 2019 Pa 3: 20 am
Akafuridzirwa. Pfungwa dzemunamato dzakasvika panguva chaiyo. Im akabvuma muchipatara kuti avhiiwe musana.
Im chaizvo akapa zano i Jesus Name
Mufundisi Ikechukwu Chinedum Kurume 7, 2019 Pa 4: 19 am
Ameni, Kuporesa kwako kunoitwa muZita raJesu.
Kevin Jenkins Gumiguru 15, 2019 Pa 9: 51 am
Ndiri kunamatira mwanakomana wangu Dominick ane brain timer kuseri kweziso rake rerudyi. Ndiri kutenda Mwari nekukunda nekuporeswa kwake. Ndiri kukumbira iwe yaunonamata neni apo ini ndichienda kuna Mwari kunorapwa kwemwanakomana wangu uye ndiri kunamatira kuti bundu risiye muviri wake muzita raJesu. Ndinoziva Mwari anogona kuporesa uye ndiri kumukumbira kuti aporese Dominick.
Evrim sayilan Kubvumbi 16, 2021 At 6:34 pm
Babam yoğun bakımda bugün 19.günü durumu çok ağır entube ne olur dua edelim babamı kurtaralım çok iyi biri herkese hep iyilik yaptı annem ölmeden önce bir daha dünya ya gelsem babanla tekrar evlenirim dediy misikri allaha yakaradzikwa dediler ben yakariyorum sizde dua edin
Gordana Labrovic Chivabvu 24, 2021 nenguva dza 8:43 pm
Sara Gunyana 27, 2021 At 4:22 am
Please pray for me I have IBD and it can’t be cured, I have pain and bleeding every time and I have to be like that forever, I just spend my time crying on my bed, I believe Jesus is the healer🙏🏻
Zuva nezuva kuverenga bhaibheri kuronga kwaNovember 8th 2018
Kunamata Kunongedzera Kurwisa Iyo rima Gore MuNigeria
Kunamata Points Kuti Tize Musungo Womuvengi
13 Amasimba minamato manamato ekutumira kwakachengeteka